Myanmar 18 Plus: ရမ္မက်ရဲ့ ညတွေပြီးရင် အချစ်ရဲ့ မနက်ဖြန်တွေ လာမယ် (၁)
ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ ခံစားမှု နှင့် ဝင့်ဝါပြတင်းပေါက်ကနေ ဝင်လာတဲ့ လေနုအေးကြောင့် ..မနက်ဖက် နိုးထရတဲ့မနက်တွေ..အရမ်းသဘောကျမိတယ် ။ တိုက်ရိုက်မဟုတ်ပေမယ့် အလင်းရောင်ကို လုံလောက်အောင် ဖြန့် ကျက်ပေးနေတဲ့ အိပ်ခန်းရဲ့ တည်နေရာကိုလဲ ဝင့်ဝါ နှစ်သက်တယ်..။ ဘေးနားမှာ ကလေးလို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်နေတဲ့ မင်းမင်း ဆိုတဲ့ ဝင့်ဝါ ရဲ့အမျိုးသားလေးရှိနေတော့လည်း လုံခြုံသလို ခံစားရတယ်…။ တကယ်ဆိုရင်တော့ သူနိုးထလာရင်….ဝင့်ဝါတို့ နှစ်ယောက် အချစ်ကြမ်းကြဦးမှာပါလားလို့ တွေးမိတော့ ရင်ခုန်စွာနဲ့ ဘဝကိုကျေနပ်တယ် ။စိတ်ဖိစီးမှု များတာတွေတော့ ကြုံရမှာပဲ..ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်ခံစားချက်ကို တစ်ယောက်နားလည်ပြီးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးမျိုး ပိုင်ဆိုင်မိတာကိုက လောကကြီးကို ကျေးဇူးတင်ဖို့ ကောင်းတယ်။အရင်တုန်းကတော့ နည်းနည်းတော့ ခက်ခဲတာပေါ့လေ…..အခုလို အိမ်ထောင်သက် ငါးနှစ်ကျော် ကြာလာတာတောင် လင်မယားနှစ်ယောက် ဘယ်လို ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ် တစ်ယောက်ရဲ့ဆန္ဒကို တစ်ယောက်ဘယ်လောက် အလေးထားပြီး ပံပိုးခဲ့တာတွေက…အခုလို အောင်မြင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်စေခဲ့တာ ဆိုရင်လဲ..မမှားပါဘူးလို့ ပဲ ပြောချင်တယ် ။
မနက်စာတွေကို သီချင်းလေးညီးပြီး ပြင်ဆင်နေမိတယ်..။ ထမင်းကြော်နဲ့ဝက်အူချောင်းရယ် ကြက်ဥကြော်ရယ်ပေါ့ ။ ထမင်းကြော် ကြော်ပြီးလို့ ပန်းကန်ထဲ ထည့်
နေတုန်း..နောက်ကနေ အသံကြားတော့ မင်းမင်းက ထမင်းစားပွဲမှာ လိမ္မော်ရည် နှစ်ခွက်ရယ် ပြီးတော့
ခုနက လက်ရွေးစင် ကထုတ်တဲ့ 3in1 ကော်ဖီ အထုတ်ကို ဖွင့်ပြီး ကော်ဖီနှပ်ဖို့ ပြင်နေတဲ့ မင်းမင်းကို
တွေ့ ရတယ် ။ အဲဒါပဲလေ….သူက ဝင့်ဝါ အိပ်ယာထဲမှာ ရှိဦးမယ် ဆိုနေရင်တော့ အခုလို မနက်စာ ပြင်ဖို့ 
" မောနင်း…နော် ချစ်.."
" မပုတ်ပါဘူး..ချစ် ထလာလို့ နောက်ကနေ လာပြီး ကူညီပေးတာလေ…."
" အင်း မနက်စာ စားတော့မယ် နော်..ကို "
အရင်စားပြီးတော့ အိမ်သာထဲဝင်ချင်လို့ ပန်းကန် တွေကို ဘေစင်ထဲ ထည့်ပြီး…ကိစ္စလေးတွေ ကို အိမ်သာထဲမှာဖြတ်ရတယ်…. ပေါ့ပါးသွားတယ် ဝင့်ဝါ အကျင့်ကိုက မနက်စာ စားပြီးရင် အဲလိုလေးသွားမှ အဆင်ပြေတာ…မင်းမင်းလဲ အတူတူပါပဲ….။ ဝင့်ဝါ အိမ်သာက ထွက်လာတော့ မင်းမင်းက စောင့်နေတယ် ။ သူ့ အလှည့်ပေါ့ ပြီးတော့ လက်ကို သေချာဆေးပြီးတော့မှ ပန်းကန်တွေကို ဆေးတော့တယ် ။ပန်းကန်တွေ
ဆေးပြီး…ရေစစ်ဖို့ထားတဲ့ စင်လေးဆီ တင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲ…နောက်ကနေ မင်းမင်းရဲ့ ပွေ့ ပိုက်ပြီး လည်ပင်း
နောက်ကျောလေးကို နမ်းတဲ့ အထိအတွေ့ လေးရတယ် ပြီးတော့ မင်းမင်းရဲ့ ကိုယ်ကိုတစ်စောင်းလှည့်ပြီးတော့
ပွေ့ ချီတာခံရပြီးတော့ လူက ငြိမ်ငြိမ်လေး သူခေါ်တဲ့ ဆီကို လိုက်လာခဲ့တယ်…….။ လားရာကတော့ အိပ်ယာဆီကိုပေါ့………..
ခုတင်ပေါ်မှာ နှစ်ယောက်သား လုံးထွေးကျပြီးတော့ အနေအထားက မင်းမင်းက အပေါ်က ဝင့်ဝါကတော့ သူ့ ရင်ခွင်အောက်မှာ ရင်သားလေးတွေ ပြားပြားကပ်အောင် ဖိ ခံထားရတယ်…..
ဝင့်ဝါရဲ့ လက်ကလေးတွေကတော့ မင်းမင်းရဲ့ နောက်ကျောလေးကို..တင်းနေအောင် ဖက်ထားတယ်
မင်းမင်းရဲ့ ခေါင်းလေးက ဝင့်ဝါရဲ့ လည်တိုင်လေးတွေ ပါးလေးတွေ ကို မက်မက်မောမောနမ်းပြီး….ဝင့်ဝါ ကို စကားတိုးတိုးလေးပြောတယ်……
" ည က အဆင်ပြေလား..ချစ်……"
" အင်း ကိုရော.."
" ကို လဲ အဆင်ပြေပါတယ်…..ကောင်မလေး က စလင်းဘော်ဒီလေးဆိုတော့ အားရပါးရ လုပ်ပြစ်
" ကို ကကော မှုတ်ပေးလိုက်လား "
" အင်း ကို နဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ 69 လုပ်သေးတယ် အကြာကြီးပဲ…..ချစ်တို့ ကော…."
" အင်း ချစ်က ခဏပဲစုပ်ပေးရတယ် အကိုကြီးက ပြန်မှုတ်တာ.အကြာကြီးပဲ ပေါင်တွေကို အကြာကြီး
ထောင်ရတာတောင် ညောင်းတယ်. ပေါင်ကြားထဲမှာလဲ အနီကွက်တွေ ရှိတယ်ထင်တယ် ကိုကြည့်ပေးပါဦး.."
မွေ့ ယာပေါ်မှာ ခဏကြာတော့ နှစ်ယောက်သား အဝတ်အစား တွေ မရှိကြတော့ဘူး 69 ပုံစံလးနဲ့ဝင့်ဝါတို့ 
နှစ်ယောက် အချစ်ပြိုင်ကြတယ် ။ စိတ်ထဲမှာတော့ မနေ့ ညက ကောင်မလေးကို ကို နဲ့ 69 လုပ်နေတဲ့ ပုံကို
မြင်ပြီး…ကို့ ဟာကို စုပ်တော့ ညက အကိုကြီး ကို မှုတ်ပေးတာက ခေါင်းထဲပေါ်လာတယ်မင်းမင်းရဲ့ ခေါင်းထဲ
မှာလဲ …ဝင့်ဝါကို…ညက..ဟိုအကိုကြီး မှုတ်ပေးလို့ညီးတွားနေမဲ့ ပုံကို ခံစားပြီး လျှာဖျားကို ဖင်ကြားထဲထိ
အောက်ကနေ တောက်လျှောက်လေး ယုယပေးလိုက်တယ် ။ဝင့်ဝါ ပေါင်ကြားထဲကို ကို့ဒူးခေါင်း ဝင်လာ
တော့ ပေါင်လေးကို ကားပြီး…အနေအထားကို အကောင်းဆုံး ပြင်ပေးလိုက်တယ်…။ နောက်တော့ ဝင့်ဝါရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ကို့ ဟာကြီး..အဆုံးထိရောက်အောင် နှစ်ယောက်သားတစ်ယောက်ကအပင့်နဲ့ တစ်ယောက်
ရဲ့အဆောင့် တစ်ပြိုက်နက်ထဲ လှုပ်ရှားပြီး ဆီးခုံချင်း ကပ်မိသွားတယ်….။ နှစ်ယောက်သား အဲဒီ့ဖီးလေးကို မျက်လုံးမှိတ်ပြီး.
နှုတ်ဖျားကနေ…" အ " လို့ အော်ပြီး….စက္ကန့် အနည်းငယ်လောက် ဆီးခုံ ချင်းကပ်ပြီး ခံစားမိတယ်..ဝေးကွာသွားတဲ့ လူနှစ်ယောက် ပြန်ဆုံဆည်းခြင်းပေါ့ ။ မွေ့ ယာပေါ်က ကို စိတ်လျှော့ပြီး
ကော့ထားတာလေး ပြန်ကျလာတော့မှ နှစ်ယောက်သား မျက်လုံးလေးတွေ ဖွင့်ပြီး တစ်ယောက်ကို
ဝင့်ဝါ က မင်းမင်းရဲ့ ခါးကိုကိုင်ပြီး……
" ကို့ …"
မင်းမင်း ဆောင့်တာကို ရပ်ပြီး ခေါင်းလေးဆတ်ပြတယ်
ဟာ ဝင့်ဝဆီကနေ ကျွတ်ထွက်သွားတော့..ဝင့်ဝါက မွေ့ ယာကနေ…ထပြီးတော့ နံရံဖက်ကို သွားပြီး ခြေတစ်လှမ်း အလိုကျတော့ နံရံကို လက်ထောက်ပြီး ကုန်းပေးတယ်….။
" လာခဲ့ကို……နောက်ကနေလုပ်ပေး ညက အကိုကြီးက ချစ်ကို အဲ့လို လုပ်တာ…."
မင်းမင်းလဲ နောက်ကနေ သေချာခါးကို ကိုင်ပြီး အပေါက်ဝကို ချိန်ပြီး…အဆုံးထိပြန်ထည့်လိုက်တယ်
" ဘယ်လိုလုပ်သေးတယ် ချစ်ရယ်…"
" အကိုကြီးက ညက ချစ်ကို အဲလို ဆောင့်တာ…အသံတွေ ဆူညံနေတာပဲ…ချစ်လဲအော်ရတာပဲ ကောင်းလို့ "
မင်းမင်းစိတ်တွေ ပြင်းထန်လာသလို ဆောင့်ချက်တွေကလဲ ပြင်းထန်လာတယ်..
" ချစ် က ဘယ်လို အော်လဲ ကို့ ဆောင့်တာတော်တော်အရသာရှိတယ် အဲ့အကိုကြီးလဲ တော်တော်ကောင်းမှာ "
" ဟုတ် မှာပေါ့ ကိုပြောသလို ပြောသေးတယ်… မင့်ဖင်လုံးတွေက ကုန်းလိုက်ရင် ကားပြီးလုံးနေတာပဲတဲ့ "
" အင့်…အင့် ဒီလို ဆောင့်ရင်..ချစ်ဖင်တွေက တုန်သေးတယ်….အရမ်းလှတယ် "
" ချစ်ကလဲ ကောင်းလာတော့………အကိုကြီးရယ်….ကောင်းလိုက်တာလို့ လဲ..ပြောရော အကိုကြီးလဲ
ပြီးတော့တာပဲ ကိုရယ်….အင့် ဟင့်…အဲလိုဆောင့် ဟုတ်တယ် ကို ကောင်းလိုက်တာ "
ကော့ပြီး….ပြီးသွားတယ် မင်းမင်းလဲ ဆောင့်တာကို ရပ်ပေးလိုက်ပြီး ခါးကနေ ဝင့်ဝါတစ်ယောက် ဒူး မညွှတ်သွားအောင်ထိန်းကိုင်ပေးတဲ့အချိန်မှာပဲ…မင်းမင်း…လဲ
ဝင့်ဝါရဲ့ ညှစ်နေတာကို မျက်လုံးမှိတ် အရသာ ခံတယ် ။ ပြီးတော့ ဝင့်ဝါကို ပွေ
့ခေါ်ယူပြီး….ခုတင်စောင်းမှာ ခုတင်အောက်ကနေ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ဆောင့်လို့ ကောင်းမယ့် ပုံစံကို ပြင်ပြီးတော့……
" ကိုက ကောင်မလေးကို ညတုန်းက လုပ်တာ ဒီလိုပုံစံပေါ့ သူကပိန်တော့ကိုက ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ပူးကိုင်ပြီးတော့ ကို့ ပုခုံးပေါ်တင်ပြီး……..ဒီလိုဆောင့်တာ "
" ကောင်မလေးကတော့ အရမ်းကောင်းမှာပဲနော် ကိုလဲ ကောင်းမှာပေ့ါ ခြေထောက်တွေ ပူးထားတော့..
လုပ်ရတာ ကြပ်ကြပ်လေးပဲ နေမှာပေါ့ "
ကို့ မျက်လုံးတွေ မှိတ်ပြီးဝင့်ဝါကိုအားရပါးရလုပ်နေတယ်…အားး…ဝင့်ဝါထပ်ပြီးပြန်ပြီ…ကို့ ရဲ့ ဆောင့်တာတွေ စိပ်လာတယ်
အရည်တွေ အများကြီးပဲ..ကိုက ပြီးရင်..အဲလို သူလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်မလေး ကို တမ်းတပြီး ပြီးတတ်တယ် ။
အဲလို အချိန် ဝင့်ဝါ ပြန်တုန့် ပြန်မိတာကတော့
" ညီမလဲ ပြီးပြီ အကိုကြီးရယ်…"
နှစ်ယောက်သား ဖက်ပြီး ခဏလောက် အိပ်ဖြစ်ကြတယ်…….။
မြတ်မြတ် နှင့် စိတ်ဖိစီးမှု" မြတ်.."" ဟေး ဝင့်ဝါ လာလေ "" စောင့်နေရတာ ကြာသွားပြီလား "" မကြာသေးပါဘူး..ငါလဲ မြန်မြန် ထွက်လာမလို့ ပဲ မနက်က အချစ်စမ်းနေလို့"" နင်တို့ ကလဲဟာ မရိုးသေးဘူးလား "" ဘာကို ရိုးရမှာလဲ မိန်းမရဲ့ "" ငါတို့ ဆို မလုပ်ဖြစ်တာတောင်ကြာပြီ…"" ဟုတ်ကောဟုတ်သေးရဲ့လား… ဝင့်ဝါရယ် "" ဟုတ်သမှ သိပ်ဟုတ်…နင်ဘာသောက်မလဲ ကော်ဖီပဲလား "" အေး ကပ်ပချီနိုပဲ .."" ပြောပါဦး ခေါ်တဲ့ ကိစ္စက..ဘာများ အရေးကြီးနေလို့ လဲ "" ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူး… အိမ်မှာလဲ မနေချင်တာကြောင့်ပါ..ပျင်းနေလို့စိတ်ကလဲ အရင်လို မဟုတ်ဘူး" ဘာဖြစ်ရပြန်ရတာလဲ အလုပ်မှာ အဆင်မပြေလို့ လား "" အလုပ်ကတော့ အဆင်ပြေပါတယ်…..စကားပြောချင်လို့ သက်သက်ပါ ဘာလဲ နင်က မအားလို့ လား "" နင့်ပြန်မေးရမှာ ငါတို့က ကလေးရှိတာ မဟုတ်ဘူး နင်က ကလေးနဲ့ပြီးတော့ အလုပ်ကလဲရာထူးကလဲ မသေးဆိုတော့ "" အေးပါဟာ…."" ဒါနဲ့နင်ခုနက ကိစ္စ ဆက်ပါဦး ဘာကိုလဲ နင် မလုပ်ဖြစ်တာ ကြာပြီဆိုတာက "" အေးဟာ တကူးတကကြီး မလုပ်မဖြစ်တာကို ပြောတာ လတောင် ချီနေပြီ "" ဟာ...နင်ကလဲ…ကိုဝေလင်း သနားပါတယ် ပစ်မထားပါနဲ့"" သူကကို မစတော့တာ ကြာပြီ "" စိတ်အပြောင်းအလဲ ဖြစ်အောင် ခရီးလေး ဘာလေး ထွက်ကြည့်ပါလား "" ငါတော့ မပြောချင်ပါဘူး.. နင့်ဖာသာမင်းမင်းနဲ့ ပြောခိုင်းကြည့် တော်ကြာအရမ်း လိုချင်သလို ဖြစ်နေဦးမယ်"" အေးအေး ငါ မင်းမင်းကို ပြန်မေးကြည့််ဦးမယ် "(မင်းမင်း နှင့် ဝေလင်း မှာ အလုပ်တူတူ လုပ်သူများဖြစ်ကြသည်..ဝင့်ဝါနှင့် မြတ်မြတ်မှာတော့ အရင်တုန်းထဲက သူငယ်ချင်း များဖြစ်သည်)" နင်ကော ဘာတွေလုပ်လဲ ဟိုတစ်ခါ နင်ပြောတဲ့ကိစ္စက တကယ်ကြီးလား "" ဘယ်ဟာကို ပြောတာလဲ "" နင်တို့ သဘောတူညီမှု စာရွက်တွေနဲ့ ဟာလေ "" သြော် မနေ့ ညကတောင် တစ်ပွဲဖြစ်သေးတယ် "" ဟယ် နင်ကလဲ ငါက နင်ပြောမှ သိတာ ဘာလို့ မှန်းကို စဉ်းစားလို့ တောင် မရဘူး "" ဟိဟိ…ဒါတော့ ခံစားကြည့်မှ သိရမှာပေါ့ "" နေပါဟာ… ဘဝမှာ အဲ့ကိစ္စကြီးကို ရှေ့တန်းတင်ပြီးလဲ လုပ်စရာမလိုပါဘူး "" နင်ကတော့ ဒါတွေ ဘယ်နားလည်မလဲ စာအုပ်ကြီးအတိုင်းပဲ နေတာကိုး… ကိုဝေလင်းတောင် အခု နင်နဲ့ မအိပ်ဖြစ်လို့ဘယ်သူနဲ့ သွားနေ ပြီးပြီလဲ မသိဘူး သွားလဲသွားပါစေပေါ့ ငါတောင်သက်သာသေး……."" နင်ကော တခြားဟာလေးတွေ…မရှိဘူးလား အလုပ်မှာလေ…"." ဘာကိုပြောတာလဲ "" မိန်းမရယ် ရှို မနေစမ်းပါနဲ့နင်က ငါ့ထက်တောင် လှသေးတာကို နင့်ယောင်္ကျားနဲ့လုပ်တာကိုတောင် ဒီလောက် အကြာကြီး နေနိုင်တာဆိုတော့ ဟင်းဟင်းးးး ရိုးတော့မရိုးဘူးနော် "" ငါက ဘာဖြစ်နေလို့ လဲ "" ဟဲ့ ပြောပြဟာနော်…ငါတောင် လူသိခံလို့ မရတဲ့ ကိစ္စကို ငါ့ယောင်္ကျား မသိအောင် နင့်ကို ပြောပြထားသေးတာကို .."" နင့်လို မဟုတ်ဘူးဟေ့ နင်က အိမ်မှာ နေရတာ..အေးအေးဆေးဆေးးနဲ့ငါကတော့ ရုံးမှာ လူကြီးလို နေရတာလေ…"" လူကြီးလို နေတော့လဲ….လူကြီးတွေက …ဟင်းဟင်း..."" နင်ဘာတွေ သိထားလို့ ငါ့လာအစ်နေတာလဲ နင်ကလေ ကျောင်းတုန်းက အတိုင်းပဲ နင့်ဆီရောက်ရင် ဘာမှ ဖုံးထားလို့ မရဘူး "" အင်းပေါ်လာပြီ ဘာလဲ ပြောပြ "" ဘယ်သူမှ လျှောက်မပြောနဲ့ နော် နင်ထင်သလိုတော့ မဟုတ်ဘူး ဘာမှ လဲ ဖြစ်တဲ့ကိစ္စလဲ မဟုတ်ဘူး" ငါ ပိုသိချင်လာပြီနော်….ပြောပြတော့ "ဘေးဘီ ကြည့်လိုက်တော့ ဘယ်သူမှ လဲ ကိုယ်တွေ ဝိုင်းနားမရှိတာရယ် လူရှင်းနေတာကြောင့်ပြောရင်ကောင်းမလား ကျွန်မ စဉ်းစားမိတယ် မထူးပါဘူးလေ..သူ့ ပြောလိုက်ရင်တော့ ရင်ထဲ ပေါ့သွားတာပေါ့" ဒီလိုဟာ….."မြတ်မြတ်တို
့ရုံးက မနက်ပိုင်းတွေသာ အလုပ်များ လူများတာ မနက်ပိုင်း short meeting ပြီးရင် အကုန်လုံးက Sale call တွေ ထွက်တဲ့လူ ကထွက် marketing သွားတဲ့လူက သွားနဲ့ရုံးမှာက account တို့ admin တို့ ပဲ ကျန်ခဲ့တာလေ ။ ရုံးခန်းက နေ့ လည်ဆိုရင်တော့ တိတ်ဆိတ်နေတာ များတယ် ။ ကိုယ့် ရုံးခန်းနဲ့ ကိုယ်ဆိုတော့ ကိစ္စရှိမှပဲ….ဟိုအခန်း ဒီအခန်းကူးတော့တယ်….မြတ်တို့ က management ပိုင်းကလူတွေဆိုတော့ အေးအေးဆေးဆေးပဲ ။ ဒီလို အေးအေးဆေးဆေး ဖြစ်အောင်လဲ ဆရာ့ကို ကျေးဇူးတင်ရမယ် ။ မြတ်ကို ၅နှစ်အတွင်းမှာ ရာထူးတွေ တဆင့်တဆင့်တက်ပေးခဲ့တာ မြတ် ကြိုးစားခဲ့သလို ဆရာကလဲ အားပေးခဲ့တယ် ။ ဆရာဆိုတာ ကိုအောင်ကြီးပါ…။ မြတ် ထက် ၅နှစ်ကျော်ကျော်လောက် ကြီးတယ်….ကျန်းမာရေးလိုက်စားတော့ ဆရာ့ကို ကြည့်ရင် ၃၀ ဝန်းကျင်လောက်ပဲ ထင်ရတယ် ။အမှန်တော့ဆရာက ၃၄ လောက်ရှိပြီ.။ ဖြစ်လာပုံကတော့ ဆန်းတယ်။ တစ်ရက် ဆရာ့ ရုံးခန်းထဲ သွားတော့ဆရာ laptop ကို အာရုံစိုက်ပြီး ကြည့်နေတာ တွေ့ တယ်.။.နောက်ချင်တာနဲ့တိတ်တိတ်လေး ဝင်သွားတာ ဆရာ သိတောင်မသိဘူး….။" ဆရာ့…"" အမလေး..လန့် လိုက်တာ…မြတ်ရယ် "ဆရာဘာတွေ အာရုံစိုက်နေတာလဲ ? ။ မြတ် ဆရာ့ laptop ကို ကြည့်မလိုလုပ်တော့ အတင်းဟိုဖက်စောင်းတယ်" Personal တွေပါ…"" သြော်……ဆရာ့အကြောင်းကို မြတ်အကုန်သိနေတာကို.."" နင်မသိပါဘူး………"" ပြော ဘာကိစ္စ လဲ "" မနေ့ က supplier ကိစ္စလေ ဆရာ သဘောတူညီမှုဟာလေး.. မြတ် လုပ်ထားတာ လာပြတာ ပြင်စရာရှိရင် ပြင်လို့ ရအောင်လို့"" အင်း ထားခဲ့လေ "" မဟုတ်ဘူး ဒီညနေ ပေး၇မှာ တစ်ခါတည်းစစ်ရအောင် လာတာ "" ပေး……"ဆရာ စာချုပ်ကို သေချာဖတ်နေတုန်း……..မတ်တပ်ကြည့်နေတော့" ဒီမှာ….."" ရှင် ဆရာ…."" ဒီအချက်က ထည့်စရာမလိုဘူးလေ..သူက main supplier အကြီးစားမဟုတ်တော့ ဒီလိုသတ်မှတ်ရက် အတိုင်းမရပါက ပယ်နယ်တီ အဖြစ်ယူတဲ့ ဒဏ်ကြေးကများနေတယ် "" ဟုတ် မြတ် အဲဒါကို သတိလွတ်သွားတယ် မှားသွားပါတယ် "မြတ်လဲ….စားပွဲခုံမှာ ခါးလေးကိုင်းပြီး ဘောပင်နဲ့ အကြမ်း ပြင်တော့ ဆရာနောက်ကို ရောက်နေတာ သတိမထားမိလိုက်ဘူး ။" အပြစ်ရှိတယ်နော်..အဲလို အသေးအမွှားမဟုတ်တဲ့ ဟာတွေ သတိထား "" ဟုတ်…အခုလို ပြင်ပေးတဲ့ ဆရာကို မုန့် ဝယ်ကျွေးပါ့မယ် "" နောက်တစ်ခါ မမှားအောင် မှတ်မိအောင်လုပ်ရမယ်…."" ရှင်……ဘာပြောတာလဲဆရာ "" ဟိုမှာကြည့်စမ်း….."မြတ်ဆရာ လက်ညွှန့် ပြရာ ကြည့်တော့ ဘာမှ မရှိဘူး..ဆိုပြီး ဒီဖက်ပြန်လှည့်တော့ ဆရာက အနားနားရောက်နေပြီး…မြတ် ညာဖက်တင်ပါးကို သူ့ ညာလက်နဲ့ ဖမ်းညှစ်တယ် ။ မြတ်လဲ လန့် သွားတယ် ။ အရင်က ဆရာက အဲလိုမှ မလုပ်တာ အဲလိုမျိုးမလုပ်တတ်ပါဘူး…မောင်နှမလိုနေတာ ။" အာ့..ဆရာ…လွှတ်ပါ….."ခါးလေးတွန့် ပြီး ရုန်းသလိုလုပ်တော့ မြတ်ရှေ့ကနေ….မတ်တပ်ရပ်ပြီးတော့ တည့်တည့် ဖက်သလို ပုံစံနဲ့ လက်နှစ်ဖက်က တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို ကိုင်တယ် ။ လူကလဲ ဆရာ့ရင်ခွင်ထဲ ရောက်နေတယ် ။မြတ်ကကြောက်နေတော့ ပြီးတော့ ခံစားရတာ တမျိုးကြီး ဖြစ်နေတော့ လူက ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားတယ်။ တစ်ခါမှ မျှော်လင့်မထားတဲ့ အဖြစ်လေ…။" မြတ်…."" အို့လွှတ်ပါ…"" နောက်တစ်ခါမှားရင်…….ဒီထက်ဆိုးမယ်နော်….."" ဟုတ်…သွားပါရစေတော့ ."မလွှတ်ခင်..မြတ်တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို
အားရအောင် ညှစ်ပြီး…..ဆရာ့ရဲ့ခါးက ကော့လိုက်တော့ ဖိဆောင့်တဲ့ ပုံစံနဲ့မြတ်တောင် ကြက်သီးတွေ ထသွားတယ် ။" ကလေးမွေးပြီးတာတောင်…. တင်းနေတာပဲ မြတ်….ငါကြိုက်တယ်….."မြတ်လဲ ဆရာ့လက်က နည်းနည်းအားလျှော့တာနဲ့မြန်မြန်လေး ကိုယ့်ရုံးခန်းကို ပြန်လာလိုက်တယ်..။လူကတော့ရင်တွေတောင်
တုန်တယ်.။.ခုနက နောက်ဆုံးလုပ်လိုက်တဲ့ ကော့တာဆိုရင် ဆရာ့မာမာ အချောင်းကြီးရဲ့ အရွယ်ကို သိနေတယ့် နည်းတာကြီး မဟုတ်ဘူး ။ " ဟာ မဟုတ်သေးပါဘူး ငါဘာတွေ တွေးမိနေပါလိမ့် "စိတ်ကို မနည်းတင်းပြီး ခုနက မှားတဲ့ အချက်ကို ပြင်ပြီး print ပြန်ထုတ်တယ်…။ ဆရာ့ အခန်းကို မသွားရဲဘူး….ပြီးတော့ စာချုပ်ကို သေချာစစ်တယ် ။ ဒီတစ်ခါတော့ မမှားတော့ဘူး ဆရာ့ကို မပြလဲပြီးတာပါပဲ…..ကိုယ်လဲ အတည်ပြုလို့ ရတာပဲ….။.မသွားတော့ပဲနဲ့ ရုံးခန်းထဲမှာပဲ လုပ်စရာရှိတာတွေကိုပေပြီး လုပ်နေမိတယ် ။ စိတ်ကလဲ စဉ်းစားနေတာ..ဆရာ ဘယ်လို ဖြစ်သွားတာပါလိမ့် အရင်က ဒီလို မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့…..။ညနေဖက်ရောက်တော့
အပြင်ထွက်တဲ့လူတွေ ပြန်လာတော့ evening report တွေ စစ်တော့ ဆရာကို တွေ့ တယ် ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့သလိုပဲ ။ မြတ်လဲ ပုံမှန်ပဲ… နောက်တော့ ဆရာက အားလုံးနဲ့ ရယ်ရယ်မောမော ပြောနေတော့ မြတ်လဲ စကားဝိုင်းထဲရောက်တော့ အရင်လို ပဲ စိတ်မှာ ဖြစ်သွားတယ်….။အစရှိက နောက်နောင် ဆိုသလို….လူလစ်ရင် လစ်သလို ဆရာရဲ့ ကိုင်တွယ်တာတွေ..ခံရတယ် ။မြတ်ကတော့
ကိုယ့်ဆရာလိုလဲ ဖြစ်နေတော့ ကျေးဇူးရှင်ဆိုလဲ မမှားတော့ ဘယ်သူမှ ပြန်မပြောတော့ဘူး ။တတ်နိုင်သမျှတော့ ထိန်းပါတယ်…။ ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်တာက အဲလို အကိုင်ခံပြီးရင် ..ပင်တီအောက်မှာ အရည်တွေ အနည်းငယ် တွေ့ တယ် ။ အမြဲတမ်း မဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်လဲ မကျေမနပ်ဖြစ်တယ်…။ အခုဆို…တင်သားတွေကို ကိုင်ရင်…စကားတိုးတိုးလေးတွေတောင် ဆရာပြောတယ် ။" အိနေတာပဲ….တင်းနေတာပဲ….." ဆိုတဲ့ စကားတွေ ပေါ့….။ အဲလိုမျိုး ခံစားချက်တွေကို တစ်ယောက်ထဲ ခံစားနေရတာ…..………………………..………………………..မြတ်တို
့ လင်မယားက ကားတစ်စီးပဲ ရှိတော့ တစ်ယောက်တစ်လှည့်စီ ကားသုံးကြတယ် ။ မြတ်ကားယူရင် သားကို ကြိုရတယ်..ယောင်္ကျားက ကားယူရင်တော့ သူကြိုတယ် ။ တစ်ပါတ်စီ ကားယူကြတယ်….။ကားမရှိတဲ့ ရက်တွေကျရင် စောရင်တော့ လိုင်းကားစီးတယ်..တစ်ခါတစ်လေတော့ တက်စီတော့ စီးတယ် ။နောက်ကျမှပါ…။ ဆရာ့ အဲလို တင်သားတွေ ကိုင်ပြီး နောက်ပိုင်း…။ ဘယ်လိုဖြစ်တယ် မသိဘူး..ကားပေါ်မှာ ဘယ်သူများ မြတ် ကို နောက်ကနေ ထိသွားပွတ်သွားရင်….တစ်မျိုးကြီး ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ် ။ ဟိုတစ်ရက်ကဆိုနောက်ကနေ
လူတွေ ကျပ်တုန်း အထောက်ခံရတော့….ဘယ်သူမှလဲ သတိမထားမိတော့ ငြိမ်နေလိုက်တော့
သကောင့်သားက မြတ်ရဲ့ ထင်သားကြားထဲ သူ့ ဟာင်္ကြီး ကို ထိုးထည့်ထားတာ မြတ်က ရှေ့ ကို ခါးကော့ရှောင်သေးတယ် ။နောက်တော့ ကော့ရှောင်ရတာကြာတော့ ခါးနာသလိုဖြစ်တာနဲ့နောက်ကို ပြန်ပြီး ခါးဆန့် တော့ အဲ့အချောင်းကြီးက ပြန်ရောက်လာတယ် ။ မြတ်မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတော့ကားလှုပ်တိုင်း ပွတ်သလို ဖြစ်နေတော့ ကြက်သီးတွေတောင် ထလာတယ် ။ ဆင်းရမယ့်မှတ်တိုင်ရောက်မှပဲ လူကြားထဲ အတင်းတိုးထွက်ပြီး အိမ်ပြန်ခဲ့ရတယ် ။………………..……………….." မြတ်ရယ် အဲလိုဖြစ်တော့ နင် ဘာမှ မဖြစ်ဘူးလား "" ဖြစ်တယ် အောက်မှာတော့ စိုရွှဲနေတာပဲ…."" အိမ်ရောက်တော့ ကိုဝေလင်းနဲ့ လုပ်ဖြစ်သေးလား "" မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး……………….."ဝင့်ဝါ သေချာစဉ်းစားပြီးး အကြံတစ်ခုပေးလိုက်တယ် ။" နင်နဲ့ ကိုဝေလင်း နေတဲ့အခါကျတော့ အဲဒီ့အကြောင်းပြောပြလိုက်ပေါ့ "" ငါ့ လုပ်မှာလေ နန့် တယ်ဆိုပြီး ရန်တောင် အကြီးအကျယ်ဖြစ်ဦးမယ် "" စမ်းမှာသာ စမ်းကြည့်စမ်းပါ…မပြောခင် စိတ်မဆိုးနဲ့လို့ပြောလိုက်ပေါ့ "" မလုပ်ချင်ပါဘူး..တော်ကြာ လင်မယားတွေရန်ဖြစ်နေဦးမယ် .. ကလေးကလဲ ရှိသေးတယ် "" ငါပြောတာက အိမ်မှာမဟုတ်ဘူးလေ မင်းမင်းကိုပြောပြီး နင်နဲ့ သူ တနေရာ သွားရအောင် သွားတဲ့အခါကျတော့ပြောတာပါ "" နင်က ငါ့ကို အဲလိုစမ်းခိုင်းတော့ ဘယ်လို အကျိုးအမြတ်တွေရမှာလဲ "" နင်သိလာမှာပါ မြတ်မြတ်ရယ်….ကံကောင်းရင်ပေါ့ "" သြော် ကံမကောင်းရင်တော့ ……နင်နဲ့ မဆိုင်ဘူးပေါ့ "" ငါတာဝန်ယူတယ်……တစ်ခုခုဖြစ်ရင် ငါတာဝန်ယူပြီး ဖြေရှင်းပေးမယ် "" ဘယ်လိုမျိုးတာဝန်ယူတာကိုပြောတာလဲ….."" နင့်လင်ကို တကယ်မဟုတ်ဘူး ငါက သဝန်တိုအောင်စခိုင်းတာ ဆိုပြီး ဖြေရှင်းမှာပေါ့ အဲလောက်ဆိုရပြီလား "" မသိသေးဘူး….."နောက်အပတ်သောကြာနေ
့ ညနေမှာတော့ သားကိုကြိုပြီး…..သူ့ အဖွားအိမ်ကိုပို့ ပြီး မြတ်တို့ လင်မယား ဝင့်ဝါတို့ စီစဉ်ပေးတဲ့အတိုင်း…ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ အခန်းယူဖြစ်တယ် ။ သူတို့ ပြောတာတော့ ရည်းစားဘဝက ဟိုတယ်မှာတည်းသလို တည်းခိုင်းတယ် ။ နောက်ပြီး ကလပ်တစ်ခုခု သွားခိုင်းတယ် ။အိမ်က
အိပ်ယာထက်က အိမ်ထောင်သက်တစ်လျှောက်လုံး နေခဲ့တာဆိုတော့ အပြောင်းအလဲ လည်းဖြစ် ခံစားချက်တစ်မျိုးလဲ ပြန်ဖြစ်စေတယ်ဆိုပြီး ဆေးထိုးမှုကြောင့် နှစ်ယောက်သား…သဘောတူညီစွာနဲ့ သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်ဖို့လက်ခံလိုက်တယ်….။. အဲ့ဒီညက နှစ်ယောက်သား…ညစာကို ဂျပန်ဆိုင်လေးတစ်ခုမှာ….ပေါ့ပေါ့ပါးပါးစားဖြစ်တယ် ။ သမီးရည်းစားတွေလိုလဲ ပြန်ခံစားမိတယ် ။ပြီးတော့ စကားမစပ် ပြောရမှာက ဝင့်ဝါပြောတဲ့အတိုင်း Sexy ကျစေမယ့် လည်ဟိုက် ဂါဝန်အတိုပါးပါးလေးကို
ဝတ်ဖြစ်တယ်…။.တစ်ခါမှတော့ အဲလို ဝတ်ပြီး ညဖက်တွေလဲ မထွက်ဖြစ်ဘူးလေ………. ရိုးရိုးလေးပဲ ဝတ်ခဲ့တာ များတယ် ။ မြတ်ပြောချင်တာက အဲလိုတွေတော့ တိုတိုတွေ ဝတ်ဖြစ်ပေမယ့် ဒူးခေါင်းလောက်ပဲတိုတာ ဝတ်ဖူးတာလေ…ပေါင်လယ်လောက်တိုတာတွေတော့…အခုမှ ပထမဆုံးရယ်ပါ….ဝေလင်း…..ဒီနေ
့ည ကိုမင်းမင်း…အကြံပေးလို့ လင်မယားနှစ်ယောက် အပြင်မှာ ထွက်ပြီး အစီအစဉ်နဲ
့ပျော်အောင်နေဖို့စဉ်းစားထားတယ်…။ ကိုမင်းပြောတဲ့ စကားတွေကို စဉ်းစားကြည့်တော့ … အရင်တုန်းက နဲ့မတူတဲ့ ခံစားမှုတွေ ခံစားရတယ်…စမ်းကြည့်ဖို့ လဲ ကြိုးစားမယ်…။ ဒီနေ့ မြတ် ဝတ်လာတာတွေက အရင်တုန်းက မဝတ်ဖူးတာဆိုတော့ ကြည့်ရတာ…အရမ်းမိုက်တယ် ။ ကျွန်တော်လဲ လင်မယားလို မနေဖြစ်တာ တော်တော်ကြာပြီ…။ စိတ်ကလဲ ကြာလာလို့ လား မသိဘူး တစ်ခါတစ်ခါ လုပ်ရင် တော်တော်နဲ့ မပြီးတော့ဘူး ။ပြီးတော့
မြတ်နဲ့ ကျတော့ ဘာလာရင် ဘာဖြစ်မယ် ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကြီး ရှိနေတော့ ညဖက် အိပ်လို့ တူတူ အသားချင်း ထိမိရင်တောင် စိတ်က မလာတော့ဘူး…။.ကလေးတစ်ယောက်တောင် ရနေပြီဆိုတော့တော်ရုံနဲ့မတောင်တော့တာနေမှာ ချစ်တာကတော့ ချစ်တယ်…အရမ်းချစ်လို့ယူခဲ့ကြတာလေ… တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်လဲ ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စ သားကိစ္စ ကလွဲလို့လိင်ကိစ္စတွေ တောင် မပြောဖြစ်တော့ဘူး။ အဲဒါက နှစ်တောင် ပေါက်တော့မှာ အဲလိုပြောလို့ မြတ်ကို ရုပ်ဆိုးဆိုး မိန်းမတစ်ယောက်လို့မထင်စေချင်ဘူး ။ မြတ်က မယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်လုံးမျိုးနဲ့ချောတယ်ဆိုတာ သူ့ ကိုတွေ့ ဖူးတဲ့လူတိုင်းက အသိအမှတ် ပြုကြတယ်…။ အရင်ကဆို..ကျွန်တော်တို့အပြင်ထွက်တိုင်း ပုရိသ တွေရဲ့ မျက်လုံးတွေက
မြတ်ရဲ့ တင်သားတွေပေါ်မှာ ရစ်ဝဲနေတာ အဲဒီ့တုန်းကဆို အရမ်းစိတ်တိုတာ ဒါတောင်
အခုလိုတောင်ဝတ်တာ မဟုတ်သေးဘူး။ ကျွန်တော်တို့ညစာပေါ့ပေါ့ပါးပါး စားပြီးတော့ ဟိုတယ်ကိုမပြန်ဖြစ်သေးဘူး ။ နာမည်ကြီး ကလပ်တစ်ခုကို သွားပြီး……အချိန်ဖြုန်းဖို့ လဲ လုပ်ထားသေးတယ်….။ကလပ်ထဲရောက်တော့ ဘားကိုသွားပြီး ကျွန်တော်ကတော့ ဘီယာနှစ်ခွက် နဲ့ ..စဖွင့်ရတာပေါ့ ။မြတ်
မသောက်ချင်ဘူးဆိုလို့ဝင်ကြေးထဲမှာပါတဲ့ တစ်ယောက်တစ်ခွက်ရတဲ့ ဘီယာကို ကျွန်တော်ပဲ ကိုင်ရတော့တာပေါ့…..မြတ်အတွက်ကတော့ မိုဟီတို တစ်ခွက်ပေါ့ ။ သူများတွေ ကတာကြည့်လိုက်.နှစ်ယောက်သား စကားပြောလိုက်နဲ့အချိန်နည်းနည်းကုန်တော့ အရှိန်နည်းနည်းလဲ ရလာပြီပေါ့ ခွက်တွေကတော့ မှာလာတာ
စိပ်လာတယ်…တက္ကီလာလေး နှစ်ယောက်သားချီးယားလုပ်တာ…တစ်ယောက်ကို လေးခွက်လောက်ရှိပြီ..နည်းနည်းတောင်မဟုတ်ဘူး…လစ်မစ်တောင်ကျော်ချင်နေပြီ..။မြတ်ကတော့ မြူးကြွနေပြီလေ..ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် ကလပ်မရောက်ဖြစ်တာ တော်တော်ကြာနေပြီ…အခုလို လွတ်လွတ်လပ်လပ် မဖြစ်တာကတော့ သားကို မြတ် ကိုယ်ဝန် စဆောင်ရကတည်းကပေါ့ .။အလုပ်နောက်ကို မည်းလိုက်နေကြတာမြတ်နဲ့ အတူ ကလပ်ထဲမှာ မြူးကြွပြီးတော့ ဟိုတယ်ကို ခရီးဆက်ကြတယ် ။ကလပ်ထဲမှာတုန်းက မြတ်ကို လှမ်းကြည့်တဲ့ မျက်လုံးတွေ တင်သားကို မက်မက်မောမော ကြည့်တဲ့ မျက်လုံးတွေကို ကြည့်ပြီး အရင်လို သဝန်မတို စိတ်မတိုတတ်တော့တာတော့ ထူးဆန်းတယ်လို့ တွေးပြီး….မှီထားတဲ့ မြတ်ကိုယ်လုံးကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်….။ အင်းလေ…မြတ်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို သူများတွေကြည့်တာကြည့်ပြီး…… မင်းမင်း ပြောသလိုပေါ့ ။ သူများတွေ..ကိုယ့်မိန်းမကို ဘယ်လောက်တောင် ပြစ်မှားနေလိုက်ကြမလဲတွေးကြည့်တော့ အောက်ကကောင်က မထစဖူး ထလာတယ် ….လိင်စိတ်တွေ ကြွလာတယ်…..ဟိုတယ်ရောက်တော့…မြတ်မူးမူးနဲ့ရေချိုးခန်းဝင်တုန်း…ကျွန်တော်….လိုက်ပို့ တဲ့ ဝိတ်တာလေးကို…ဘီယာပုလင်းအေးအေးလေး နှစ်လုံးမှာလိုက်တယ်….Minibar မှာ ရှိတာတွေက can ဗူးတွေ များတယ်လေ…ပြီးတော့ ကြက်သားလုံးကျော်က တစ်ပွဲ…" မြတ်….ဘာလို့ ကြာနေတာလဲ….."" အိမ်သာတက်မလို့……. ပြီး ရေပါ ချိုးလိုက်မယ်…"" သဘော အကြာကြီး ချိုးမနေနဲ့ ဦး…"" အင်းး………"" မြတ်တော့ မူးနေတယ်……"ခဏကြာတော့ ……. မှာထားတာတွေ..ရောက်လာတယ်….." ညီလေး….စားပွဲပေါ်ပဲ တင်လိုက်ကွာ….."" ဟုတ်….."အဲဒီ့အချိန်….မြတ်က ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်လာတယ်..။" အမလေး….."" ဟာ….."မြတ်ထွက်လာတာက…တာဝါကို …ရေသုတ်ရင်းထွက်လာတာ…ကိုယ်တုံးလုံးကြီး…အကုန်ကြောင်သွားတယ် ဝိတ်တာကောင်လေး ကြည့်နေတာက ..မြတ်ရဲ့ အဝတ်အစားမကပ်တဲ့…ကိုယ်လုံး ကြောင်ပြီးကြည့်နေတာ…မြတ်ကလဲ ရုတ်တရက်ဆိုတော့ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်း မသိဖြစ်သွားပုံရတယ် ရေချိုးနေတာဆိုတော့ ရေသံနဲ့ဝိတ်တာကောင်လေး…ဝင်လာတဲ့ အသံကို မကြားလိုက်ဘူးထင်တယ် ။စက္ကန့် အနည်းငယ်လောက် ကြောင်သွားပြီးမှ ကောင်လေးက ဆောရီး..ဆိုပြီး ပြောဟိုဖက်လှည့်ပြီး နေမှ မြတ်လဲကြောက်အားလန့် အားနဲ့ ….ရေချိုးခန်းထဲ ကမန်းကတန်း ဝင်သွာံးတယ်…။ ကျွန်တော်လဲ …ဘာပြောရမှန်းမသိဘူးလေ ဒေါသထွက်ရအောင်လဲ ဘယ့်သူအမှားမှ မဟုတ်တာ ။ ညီလေးရော..ဆိုပြီးတသောင်းတန် ထုတ်ပေးတော့.." အကို ပိုတာ လာပြန်အမ်းမယ်နော်…ပြီးတော့ ဆောရီးနော်..အကို ကျွန်တော်..တမင်တကာ….."" ရတယ်..ညီ မတော်တဆပဲ…ဘယ်လောက်ပိုလဲ "" ၂၅၀၀ အကို.."" ပြန် မအမ်းနဲ့မင်းယူထားလိုက်တော့ "" ဟုတ် အကို ကျေးဇူး….."" တံခါးလော့ချခဲ့လိုက်…ညီ "" ချောက်…."တံခါးပိတ်သွားတော့မှ……" မြတ်ရေ..ထွက်ခဲ့တော့ ဘယ်သူမှ မရှိတော့ဘူး.."မြတ်တစ်ယောက် တာဝါလေး လုံအောင်ပတ်ပြီး..ထွက်လာတယ်…။ပြီးတော့ မွေ့ ယာပေါ် ခေါင်းမှောက်ချပြီးအိပ်နေတယ်…။ ကျွန်တော်.. အဝတ်အစားတွေ အကုန်ချွတ်တယ်..ပြီးတော့ မီးပိတ်တယ် ။ မီးရောင် မှိန်မှိန်လေးတော့ အခန်းထဲမှာ ကျန်သေးတယ်….မှောက်ခုံလေးအိပ်နေတဲ့ မြတ်ရဲ့ ရင်ဖက်အောက်ကို နှိုက်ပြီး..တာဝါ..အစကို…လှမ်းဖြုတ်တဲ့ အချိန်မှာ မြတ်က ရင်ဘတ်ကို ကြွပေးတယ်…။ ကိုယ်တုံးလုံးဖြစ်သွားတဲ့ မြတ်ရဲ့ မှောက်ခုံလေးပေါ်ကို တက်ပြီးတော့..မြတ် တင်သား နှစ်ဖက်ကြားမှာ..လီးကို အလျှားလိုက်တင်ပြီး…တစ်ကိုယ်လုံး ကျွန်တော်မှောက်ချလိုက်တယ် ။ အရသာရှိလိုက်တာ…ကျွန်တော့်လီးကတော့ မပျော့မမာပဲ ရှိပါသေးတယ် လုံးလုံးကြီး မတ်နေသေးတာတော့ မဟုတ်ဘူး ။ ကျွန်တော်လက်တစ်ဖက်က လွတ်နေတဲ့ ခေါင်းအုံးတစ်လုံးကို ယူပြီးတော့ မြတ် ဗိုက်အောက်ထဲ ထည့်တော့…မြတ်က အလိုက်သင့် ကြွပေးတယ်…။ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး ပို့ စ် ဖြစ်သလို မြတ်လဲကြိုက်တယ်…." မြတ်….."" အွန်း…"" မူးနေသေးလား…."" အင်း….နည်းနည်းတော့မူးနေသေးတယ်…"" ထပ်သောက်မလား…"" ပြီးတော့မှ သောက်မယ်…."ကျွန်တော်…အပေါ်ကနေ ဖိသလို မဖြစ်အောင် တံတောင် နှစ်ဖက်ကို ထောက်ပြီး မြတ် ခန္ဓာကိုယ်ကို ကပ်ထားတာပါ ။ အောက်ပိုင်းကတော့ ခေါင်းအုံးခံလို့ကော့တက်နေတဲ့ မြတ် တင်သားပေါ်မှာ..လီးကရှိနေတုန်းပဲ ။ မင်းမင်းပြောတဲ့ မြတ်ကို ခံစားချက်တစ်မျိုးဖြစ်စေမယ့် စကားလုံးတွေ ဖြစ်အောင် ကျွန်တော်ပြောရတော့မယ်…။ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်သွားအောင်လို့ ပြောတာပဲ…။အစကတော့ ဂါဝန် အတိုဝတ်ထားတဲ့မြတ် ကို လူတချို့အာသာငမ်းငမ်း ကြည့်တာကိုပြောမလို့ ပဲ ။ အခုတော့ ကျွန်တော် အစီအစဉ်တစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ် ။ မြတ်ရဲ့ ကိုယ်တုံးလုံး ချွတ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို လူစိမ်းတစ်ယောက်က မြင်သွားပြီလေ…။မြတ်ဘယ်လို ခံစားရမလဲ ကျွန်တော် သိချင်လာတယ်…။ အဲဒီ့အချိန်မှာ လီးကလဲ..မတ်လာတယ်………ကျွန်တော်..ခါးလေးကို ကြွပြီး……လီးကို အောက်စိုက်လိုက်ရင် မြတ်…ဟာထဲ ဝင်သွားမှာ သိတယ် ။သမရိုးကျ ကြီးဖြစ်လို့ မရဘူး ။ ကျွန်တော် စိတ်ကို ထိန်းလိုက်တယ်…" မြတ်……."" အွန်း…ပြောဟာ…."" ခုနတုန်းက….ဟာ..ဝိတ်တာ ကောင်လေးက အကုန်မြင်သွားတယ်နော်…"" ကိုကလဲ မြတ်က သူရှိမှန်းမှ မသိတာ..တမင်တကာပြတာမှ မဟုတ်တာဆို အဲ..ဒါ ခုထိရှက်တုန်း "" ကို ..ပြီးလို့ ရှိရင်…..သူက မြတ်ကို တစ်ကိုယ်လုံး မြင်ဖူးတဲ့ ဒုတိယလူ ဖြစ်သွားပြီးပေါ့…"" မသိဘူးကွာ….."ပြောနေတဲ့ အချိန်မှာ မြတ်က ဖင်ကို ကြွပြီး….နေရာပြောင်းအောင်လုပ်တယ် ။ ဝင်သွားအောင်ပေါ့….ကျွန်တော်က မြတ်ဖင်နဲ့ ကျွန်တော့် လီးကို အကွာမခံတော့ မဝင်ဘူးလေ အရင် ပုံစံအတိုင်းပဲ ဖြစ်နေတယ် ။နှစ်ကြိမ်လောက် မြတ် ဖင်ကော့ပေမယ့် ကျွန်တော် မဝင်အောင်ရှောင်နိုင်တယ် စလို့ မရသေးဘူးလေ………" မြတ်က လှနေတုန်းပဲနော်…"" လာဖားမနေနဲ့ ……လုပ်စရာရှိတာလုပ်…"" နေပါဦး..ဖြေးဖြေးပေါ့..အချိန်ရှိပါတယ် မြတ်ရယ် "" ရှင့်သဘော…..ရှင့်သဘော "" ခုနက ကောင်လေး ခုချိန် ဘာလုပ်နေမယ်ထင်လဲ.."" ဘယ်သိမလဲ သွားမေးကြည့်ပေါ့…"" မမေးပါဘူး…သိနေတယ်……"" ဘာသိတာလဲ…."" မြတ်..ဖုတ်ဖုတ်တွေ နို့ တွေကို မှန်းပြီး ဂွင်းထုနေမှာပေါ့ ငါ့မိန်းမက ပြလိုက်တာကို…"" ထုထုပေါ့..မြတ်နဲ့ ဘာဆိုင်လို့ လဲ…"" မြတ်…."" ဘာလဲ…."" သေချာတယ်သိလား..."" ဘာကိုလဲ..အဆုံးမရှိ အစမရှိ "" မြတ်..ကို ဒီကောင်ကော..ခုနက ကလပ်ထဲက မြတ်ဖင်ကိုကြည့်နေတဲ့ကောင်တွေကော မြတ်ကို လိုးချင်မှာပဲနော်….."" ဟာ…..ကိုကလဲ…..ဘာတွေ ပြောနေမှန်း မသိဘူး…..ဘာတွေပြောနေမှန်းမသိဘူး..ဒီနေ့ ကျမှ .."" မြတ်ကလဲ…နှစ်ယောက်ထဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ်…ရှိတုန်း..အခုလို…..ပြောရတာ… ဒီလိုညမှ မပြောရင် ဘယ်နေ့ သွားပြောမလဲ တစ်ရက်ထဲပဲဟာကို…."" မြတ်..နော်…."" မြတ်….."" အင်း..."" ခုနက ကောင်လေးဆို မြတ် ကို တွေ့ တွေ့ ချင်းအရမ်း လိုးချင်သွားမှာပဲနော်…."" ဟုတ်မှာပေါ့……"" မြတ်က ဘယ်လိုသိလဲ…."" မြတ် ကို လုပ်ချင်နေတဲ့ လူတွေ အများကြီး…….."" ကို လဲ..သိတယ်…….မြတ်ကိုလုပ်ရင်လဲ..အရမ်းလုပ်ကြမှာပဲနော်…"" ကို သိရဲ့သားနဲ့ …….."" ကို သာမရှိရင်…..ခုနက မြတ်ပုံစံနဲ့ ဆို ဟိုကောင်က အတင်းတက်လိုးလိမ့်မယ်သိလား မြတ်က လှတာကိုးနော် ..သူသာ အတင်းလုပ်ရင် မြတ်ဘာလုပ်မလဲ…"" အော်ဟစ် အကူအညီတောင်း နီးရာဟာနဲ့ဆွဲလုပ်မှာပေါ့ ခံစရာလား "" ဘာဖြစ်လို့ လဲ…."" သူလို ဝိတ်တာ လုပ်တာခံစရာလားး အဆင့်အတန်း ရှိတဲ့ လူဆိုတော်သေး…."" ဘယ်လိုမျိုးလဲ………."" ရုံးက ဆရာလို လူမျိုးဆိုတော်သေး…."" မြတ်ဆရာ..က မြတ်ကို ဘယ်လုပ်မလဲ…ယောင်္ကျားရှိတာ သိသားပဲ…"" ကို..သာ…မသိတာ..မြတ် မပြောရဲလို့"" ဘာဖြစ်လို့ လဲ…ပြော "" မြတ်ဖင်ကို လာလာညှစ်တယ် လူလစ်ရင်……"" ဟင် အရင်တုန်း ကဆရာ တပည့်တွေလေ မဟုတ်ဘူးလား "" မသိဘူး…..ကို နဲ့ လဲ သိနေတာကို လာလုပ်တယ် "" မြတ် ကမပြောဘူးလား.."" မပြောရဲဘူးလေ..သူက မြတ် လေးစားရတဲ့လူလေ…"" ကို့ ကို ဘာလို့ အစောကြီးထဲက မပြောတာလဲ…."" ကို သိရင် မကောင်းဘူးလေ…ခုလဲ မြတ် ဘာမှ ဖြစ်တာမှ မဟုတ်တာကို.. ခုနကတောင် မြတ်တစ်ကိုယ်လုံး ဟိုကောင်လေး မြင်သွားတာကို .."" ကဲထားပါ….ဆရာ..က ဘာတွေ လုပ်သေးလဲ…"" ဟင့်အင်း ဘာမှ မလုပ်ပါဘူး….ဖင်ကိုပဲ ညှစ်တာ…"" မြတ်ကိုလုပ်ချင်လို့ နေမှာပေါ့ လာညှစ်တာ…"မြတ် နဲ့ အဲလိုပြောနေတဲ့ အချိန်မှာ လီးက တော်တော် တောင်လာတယ် ။" မသိဘူးလေ…….တော်ကြာ နှစ်ယောက်ထဲ ရှိတုန်း..မြတ်ဆရာက မြတ်ကို လုပ်လိုက်ရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ…"" အဲလိုတော့ ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲ ကို ရယ် ."ကျွန်တော်…..လီးကို
ဖင်ကနေ ခွာပြီး…….လက်နဲ့ ကိုင်ပြီး မြတ် ဖုတ်ဖုတ် ရှိတဲ့နေရာကို တည်လိုက်တော့ မြတ်…ဖုတ် အဝမှာ အရည်တွေ တော်တော်များနေပြီ..မြတ်တော်တော် စိတ်လာနေတယ်…ကျွန်တော်..ထိုးထည့်လိုက်တော့ အရည်တွေ များနေတော့ ချောချောချူချူ..လီးက အဆုံးထိဝင်သွားတယ်..ဒီပစ္စည်းနဲ့ ဒီပစ္စည်းကတော့ ချောင်နေပြီလေ…။ ကျွန်တော် အားရပါးရ အချက်တော်တော်များများ….အားရအောင်ဆောင့်ပစ်လိုက်တယ် ။ မျက်လုံးထဲမှာ ပေါ်လာတာက မြတ်ရဲ့ ဆရာမျက်နှာ…ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ မြတ်ဖင်ကို ညှစ်နေတဲ့ ပုံကြီး ပေါ်လာလို့ ပါ။မျက်လုံးထဲမှာ မြတ်က ဖင်လေးကော့ထားတာ…။ဆက်ဆောင့်ရင်ပြီးမှာ စိုးလို့ခဏရပ်ထားရတယ်…။" မြတ်..ရရဲ့လား.."" အင်းရပါတယ်……..ကောင်းတယ်.."" အပျိုတုန်းကဆို မြတ်ဟာလေးက တင်းကြပ်နေတာပဲနော်.."" ကိုနော်..ဘယ်တူတော့မလဲ………"" အင်းနော်..ကို့ ဟာက မြတ်ဟာ ကျယ်သလောက် လိုက်မကြီးတော့ ချောင်သွားမှာပေါ့ "" သဘာဝပဲဟာကို……"" မြတ်…ခဏနားရအောင်.."" မပြီးသေးဘူးမလား...."" အင်း..မြတ်ကော.."" ခုနက တစ်ခေါက် ပြီးသွားတယ်…."" လာ..ထ ဘီယာ သောက်ရအောင်…"" မသောက်ချင်ဘူး..ဘီယာင်္ကြီး….."" စပိုင်ရှိတယ်..သောက်မလား ဘလက်လေ…နှစ်လုံးရှိတယ် minibar ထဲမှာ…"" ဖေါက်ပေး…."ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်…ဘီယာသောက် ဝိုင်သောက်တုန်း တီဗီကို ဖွင့်ကြည့်တော့….မြန်မာကားဖြစ်နေလို့ လိုင်းပြောင်းကြည့်တယ် ။ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပြောင်းရင်းနဲ့နောက်ဆုံးလိုင်းမှာ ပြနေတာကအခွေလိုင်း အောကားပြနေတာ….ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လဲ အဲ့လိုင်းပဲ ကြည့်လိုက်တယ်..။စကြည့်တော့
တစ်ခန်းပြီးခါနီးပါ…ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ ကောင်မလေး မျက်နှာပေါ်..လရည်တွေ ပန်းနေတဲ့ အခန်းဆိုတော့ ပြီးခါနီးပြီလေ ။ နောက်တစ်ခန်းကျတော့မှ ဂျပန်မလေးပေါ်လာတယ်…။ ကားက ဂျပန်မနဲ့အဖြူကောင် ကြုံးတဲ့ကားပါ…။ အဖြူကောင် လီးက တော်တော်တုတ်တယ်…ဂျပန်မဟာထဲ ကဆွဲထုတ်ရင်အတွင်းသားလေးက ကြွတက်လာတယ်….တင်းကြပ်တဲ့ အနေအထားလေ…။" မြတ်………"" အင်း…"" မြတ်..ဖုတ်ဖုတ်ကလေ….အဲလို လီးကြီးကြီးနဲ့ မှ ကွက်တိကျပြီး မချောင်တော့မှာ………."" ဟုတ်တယ်….ကို့ ဟာက သေးတယ်..ကားထဲက ဟာကြီးက အကြီးကြီးပဲ "ကျွန်တော်ဟာကို သေးတယ်ပြောတော့ စိတ်မဆိုးပဲ ခုနက မပြီးသေးတဲ့..လီးက ပြန်တောင်လာတယ်" မြတ်..အဲလို လီးမျိုးရရင် အလုပ်ခံမလား "" စဉ်းစားမယ်လေ..ခိခိ…"" နှစ်ခါမပြောရဘူး တော်တော် လိုချင်နေတယ်..ဟုတ်လား..."" သူပဲ အရင်စပြောပြီးတော့..."" အင်းလေ…..အဲလို ဟာကြီးနဲ့အလုပ်ခံချင်လား..." " အင်း ကို ရှာပေးမလို့ လား..."" ဘာလို့ ရှာပေးရမှာလဲ..မြတ် ဖာသာရှာပေါ့ "" မြတ်က ဘယ်လို ရှာမလဲ…..ယောင်္ကျားတကာ လိုက်ကိုင်ကြည့်ရမှာလား.."" ကိုင်ရဲရင် ကိုင်ပေါ့…."" တကယ်ပြောတာလား….ကို့ ထက်ကြီးတဲ့ လီးက အများကြီးပဲနော်…"" မြတ်က ဘယ်လိုသိလဲ….."" ဆရာလေ….သိလား ကို့ ထက်ကြီးတယ်….."မြတ် အဲလို ပြောလိုက်တော့ ကျွန်တော် မနေနိုင်တော့ဘူး….မြတ်ကို ထိုင်နေရာကနေ ဆွဲပြီး…ကျွန်တော် တီဗီ ဖက်ကို မျက်နှာမူထားတော့ သူကို့ကျောပေးပြီး ထိုင်ချခိုင်းတယ်…။ လီးကတော့ ဝင်နေကျ တွင်း စွပ်ကနဲပဲ ဝင်တယ်..။ မြတ်က စကားစပြောတယ် ။" မြတ်ကို ဆရာ .ဆရာ ဖင်ကိုင်တော့ မျက်နှာချင်းဆိုင်လေ….သူ့ ဟာကြီးက မြတ် ပေါင်ခြံကို ထောက်ထားတာ……အကြီးကြီးပဲကို မြတ်သိတယ်…."မြတ်က အဲလိုပြောပြီး အပေါ်ကနေ ဆောင့်ပေးတယ် ။ မြတ်လဲ အဲလိုပြောပြီး လုပ်နေတာ အရည်တွေ အများကြီးထွက်နေတာကို ကြည့်ပြီး…….မြတ်စိတ်တွေ တအားလာနေတာကို ကျွန်တော်သိတယ် ။ကျွန်တော်…..တီဗီကို ကြည့်တော့ ဂျပန်မလေးကို အဖြူကောင်ကြီးက အမုန်းဆွဲနေတာကျွန်တော်
မျက်လုံးထဲ မြင်ရတာက. မြတ်ကို သူ့ ဆရာက နောက်ကနေ လိုးနေသလို ကျွန်တော့်မျက်လုံးထဲမှာ တီဗီကို ကြည့်ပြီး…….တကယ်လို ခံစားလာရတယ်…' မြတ်…'ကျွန်တော် အမောတကောနဲ့မြတ်ကိုခေါ်တယ် ။ မြတ် လှုပ်ရှားမှုလေးရပ်သွားတော့….." တီဗီထဲကို ကြည့်စမ်း.. ကိုပြောသလို ခံစားကြည့်စမ်း….."" ပြောလေ ..ကို ဘာ ခံစားရမှာလဲ….."" မြတ်က တီဗီထဲမှာ ဖင်လေး ကုန်းနေတယ်နော်…သိလား "" အင်း.."ကျွန်တော်..ထိုင်ရာကနေ မြတ် ခါးကိုကိုင်ပြီး မတ်တပ်ရပ်လိုက်တယ် လီးကတော့ မကျွတ်သွားဘူး ။မတ်တပ်လုပ်တဲ့ ပုံစံပေါ့….ဖြည်းဖြည်းချင်းးး တီဗီ..ရှိတဲ့ ..ခုံနားကိုတိုးသွားတော့ မြတ်ရဲ့ လက်တွေက တီဗီ ခုံကို လက်ထောက်ပြီး မတ်တပ် အနီးကပ်ကြည့်တဲ့ပုံပေါ့ ။ ကျွန်တော်က နောက်ကနေ မတ်တပ်ရပ်ပြီးမြတ် ။လီးကတော့ မြတ်ရဲ့ အထဲမှာပဲ မြတ် စိတ်ပါလာအောင်….လေးငါးချက်လောက်ဆောင့် လိုက်တော့မြတ် ခါးလေးကော့သွားတယ်….။ပြီးတော့ ဖြေးဖြေး ချင်းတစ်ချက်စီ..ဆောင့်ဆောင့်ထည့်ပြီး….." မြတ်..တီဗီထဲမှာလေ ..မြတ်က ဂျပန်မလေးလေ နော် "" အင်း…."" ခံစားကြည့်………."" နောက်ကနေ ဘယ်သူလိုးနေလဲသိလား '" ကိုပေါ့.."" မဟုတ်ဘူးမြတ်…သေချာကြည့်…လီးက အကြီးကြီးလေ "" အင်း……"" မြတ်ရဲ့ ဆရာပေါ့ "" အိုး...ကို ကလဲ :" ဟုတ်တယ် မြတ်…တီဗီထဲမှာ..ကို အပြင်မှာခံစားကြည့် နောက်ကနေ မြတ်ကိုလိုးနေတာ ဘယ်သူလဲ…"" ဆရာ….."" ဆရာ့လီးကြီး…ဝင်နေတာကကော…."" မြတ်..ဟာထဲမှာ…"" ကို ဘာလုပ်နေလဲ သိလား..."" ဘာလုပ်နေလဲဟင် ကို "" မြတ်ကို ဆရာလိုးနေတာကို ကြည့်နေတာ…."" ကိုကလဲ…..ကြည့်ပါဦး…….မြတ်ကို တအားလုပ်နေပြီ………."ကျွန်တော် မထိန်းနိုင်တော့ဘူးမြတ်ရဲ့ မြတ်ကို တအားလုပ်နေပြီ…..ဆိုတဲ့ အသံလဲကြားရော ဘယ်လိုမှ ထိန်းလို့ မရတော့ဘူး…..ကျွန်တော်ပြီးသွားတယ်………။ မြတ်…..ဟာက ကျွန်တော့်..ဟာကို ညှစ်နေတယ် ။မြတ် ပြီးပြန်ပြီ………………..။
အပိုင်း ၂ ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ Posted by